TORO-HEVITRA HAMPAZOTO MIVAVAKA - Jaona 16:24 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Toriteny Al6 man. TRINITE – 03/07/2016 – Past. RASETA
Toriteny Al11 man. TRINITE – 07/08/2016 – Past. RASETA
Indro tompoko atolotra antsika manaraka ity ireo torohevitra hampazoto mivavaka, izay nosoratan’i Pastora EDOANY Govin, Mpitondra Fitandremana ANDROHIBE, ary isaorantsika azy. Manasa antsika Fiangonana hanjohy izany ary ahazo soa amin’ny vavaka ataontsika tokoa.
Hoy Jesosy: « Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin’ ny anarako hianareo; mangataha, dia hahazo hianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo. » Jaona 16:24
Inona avy moa no manesika antsika hivavaka?
– Raha izay manahirana sy manery antsika no anton’ny ivavahanantsika, fa tsy mamantatra tsara izay antony nampianaran’i Jesosy azy isika, dia hanjary ho avy amintsika ny antom-bavaka ka dia tsy mamaly Jesosy na Andriamanitra (Mat.6:5-15).
– Aoka ho izay nampianarin’i Jesosy no hataontsika fototra amin’ny antom-bavaka, mba hitarika antsika amin’ny lalam-bavaka rehetra na aiza na aiza, na inona na inona.
1) Jesosy dia nampianatra fa ny vavaka dia natao hihaonanao manokana amin’Andriamanitra ao amin’ny efitrano mihidy (Mat.6:6).
– Impiry ary hianao no nanao izany?
2) Ny vavaka dia hatao amin’ny fahatokiana sy tsy amin’ny fisalasalana (Jak.1:6-8).
– Sahia mangataka ary ataovy amin’ny finoana sy tsy fisalasalana.
3) Aza anononana fanamarinan-tena mihitsy ny vavaka raha tiana hisy valiny (Lio.18:9-14).
4) Aoka ho fo vonona ny hamela heloka koa no entina mivavaka, fa tsy fo mbola feno fankahalana (Jak.2:13).
5) Raha mivavaka isika dia tokony hangataka fitarihana @ Ilay Fanahin’ny fivavahana izay mahay mifona ho antsika amin’ny fahalementsika (Rom.8:26-27).
6) Ataovy amin’ fahatokiana sy fanantenana ny vavaka satria Jesosy nanome toky fa hihaino Andriamanitra (Jao.16:23-24).
7) Ny vavaka dia mety hahazoana fifaliana tanteraka raha atao araka ny maha sakaizan’i Jesosy antsika (Jao.16:23-24).
8) Raha misisika amin’ny vavaka fangatahana rariny amin’ny olana mahazo antsika isika dia mamaly vavaka ihany Andriamanitra (Mat.15:21-28; Lio.22:39-46; Jak.5:12-18).
9) Mampisokatra fifankazahoana am-po eo amin’Andriamanitra sy ny mpivavaka ny vavaka, ary tsy fahambaniana ny mangataka zavatra amin’Andriamanitra fa toy ny zanaka mangataka zavatra amin’ny Ray aman-dReny (Mat.7:7-11).
10) Ny mandohalika dia nahazoan’i Jesosy rariny tamin’Andriamanitra Rainy mihitsy tamin’ny tolom-bavaka nataony (Lio.22:39-46; Heb.5:7-10).
11) Ny fo no mivavaka ka aoka ho vokatry ny fo ny vavaka atao ho fanatrehana an’Andriamanitra (Rom.8:26-27).
IREO ANDININ-TSORATRA MASINA VOALAZA ETSY AMBONY
« Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin’ ny anarako hianareo; mangataha, dia hahazo hianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo. »
5 Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy; Fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin’ny synagoga sy eo an-joron-dalana hahitan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany.
6 Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin’ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina no hamaly anao.
7 Ary raha mivavaka ianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa; Fa ataony ho ny hamaroan’ny teniny no hihainoana azy.
9 Koa amin’izany mivavaha toy izao ianareo: Rainay Izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao.
13 Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny* ratsy**. [*Na: amin’ilay] [** Ampio hoe: Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena]
14 Fa raha mamela ny fahadisoan’ny olona ianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo Izay any an-danitra.
15 Fa raha tsy mamela ny fahadisoan’ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny Rainareo.
6 Nefa aoka hangataka amin’ny finoana izy ka tsy hiahanahana akory; fa izay miahanahana dia toy ny alon-dranomasina entin’ny rivotra ka atopatopany.
7 Fa aoka tsy hanampo handray zavatra amin’ny Tompo izany olona izany:
8 olona miroa saina izy, miovaova amin’ny alehany rehetra.
9 Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin’ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa;
10 Nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan’ny tempoly hivavaka, ny anankiray Fariseo, ary ny anankiray mpamory hetra.
12 Mifady indroa isan-kerinandro aho; mandoa ny fahafolon-karena amin’izay azoko rehetra aho.
Fa fitsarana tsy misy famindram-po no ho anjaran’izay tsy mamindra fo; ary ny famindram-po kosa dia faly, fa tsy mba matahotra ny fitsarana.
23 Ary amin’izany andro izany dia tsy hanontany Ahy na inona na inona ianareo; lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona hangatahinareo amin’ny Ray dia homeny anareo amin’ny anarako izany.
24 Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin’ny anarako ianareo; mangataha, dia hahazo ianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo.
Mat.15:21-28; Lio.22:39-46; Jak.5:12-18
21 Dia niala teo Jesosy ka nankany amin’ny fari-tanin’i Tyro sy Sidona.
22 Ary, indro, nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin’izany tany izany ka niantso nanao hoe: Mamindrà fo amiko, Tompoko, Zanak’i Davida ô! ny zanako-vavy ampahorin’ny demonia loatra.
24 Ary Izy namaly ka nanao hoe: Tsy nirahina Aho afa-tsy ho amin’ny ondry very amin’ny taranak’isiraely.
26 Fa Izy namaly ka nanao hoe: Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely.
27 Fa hoy ravehivavy: Marina izany, Tompoko; fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombintsombiny latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony ihany.
28 Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zananivavy tamin’izay ora izay.
40 Ary raha vao tonga tao amin’izany tany izany, dia hoy Izy taminy: Mivavaha mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy.
44 Ary fadiranovana Izy, ka dia nivavaka mafimafy kokoa; ary ny dininy dia tahaka ny rà nipotrapotraka tamin’ny tany.
45 Ary nony nitsangana avy nivavaka Izy, dia nankeo amin’ny mpianatra ka nahita azy matorin’alahelo.
46 Dia hoy Izy taminy: Nahoana no dia matory ianareo? Mitsangàna, ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy.
12 Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra, ry rahalahiko, aza mianiana, na amin’ny lanitra, na amin’ny tany, na amin’izay fianianana hafa akory aza; fa aoka ny fanaikinareo ho « Eny », ary ny fandànareo ho « Tsia », fandrao hiharan’ny fitsarana ianareo.
14 Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny loholon*’ny fiangonana**; ary aoka hanosotra diloilo azy amin’ny anaran’ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy; [* Gr. presbytera] [** Gr. eklesia]
16 Koa mifaneke heloka ianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana ianareo. Ny fiàsan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.
17 Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny ranonorana; dia tsy nilatsaka tamin’ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana.
9 Ary iza moa aminareo, raha angatahan’ny zanany mofo, no hanome azy vato?
11 Koa raha ianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo Izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an’izay mangataka aminy?
7 Tamin’ny andron’ny nofony, raha nanao* fivavahana sy fangatahana nomban’ny fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin’izay nahavonjy Azy tamin’ny fahafatesana Izy, sady voahaino noho ny fahatahorany an’Andriamanitra**, [* Gr. nanatitra] [** Na: voahaino ka afaka tamin’ny fahatahorany]
8 dia nianatra fanarahana tamin’izay fahoriana nentiny Izy, na dia Zanaka aza;
9 ary rehefa natao tanteraka Izy, dia tonga loharanon’ny famonjena mandrakizay ho an’izay rehetra manaraka Azy,
10 fa notononin’Andriamanitra hoe Mpisoronabe « araka ny fanaon’i Melkizedeka. »